Tottenham ayaa iska burisay Tababarahooda Jose Mourinho kadib 17 bilood oo uu la joogay… – Hagaag.com
Posted on 19 Abriil 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Tottenham ayaa iska burisay Jose Mourinho maanta oo Isniin ah, kadib markii uu kooxda soo leyliyay 17 bilood, wuxuu isu diyaarinayey inuu hogaamiyo kooxda tartanka League Cup finalka.
Mourinho ayaa ku biiray kooxda Tottenham November 2019, isaga oo markaasi bedelay Mauricio Pochettino, kaasi oo kooxda ku hogaamiyay inay gaarto finalka Champions League, kadib inta ayna isku daadan hal mar.
Mourinho ayaa ku guul dareystay inuu kooxda ku soo celiyo Champions League, waxaa kaloo u raacay isku daadasho xilli ciyaareedkan, kooxda ayaa aheyd tan koowaad kala horeynta bishii December, waxayna hadda fadhidaa kaalinta 7aad.
” Jose iyo team-kiisa shaqaalaha ayaa nala joogay qaar ka mid ah waqtiyada ugu adag kooxda” sidaasi waxaa yiri hogaamiyaha Tottenham Daniel Levy. Jose waa nin shaqo yaqaan ah, shaqsi ahaan waan u riyaaqay la shaqeyntiisa, waxaan ka qoomameynayaa arrinta oo wareegsatay oo shaqeyn weysay, mar walba waa lagu soo dhaweynayaa halkan, waxaana jecelnahay inaan u mahad celino isaga iyo shaqaalihiisa inta ay ku soo kordhiyeen kooxda.
Mourinho ayaa meesha ka baxay isaga oo la lahaa ciyaar ka tirsan Premier League ay isku arki lahaayeen Southampton iyo finalka League Cup-ka oo la qaban doono Axada iyagoo la leh Manchester City, Tottenham ayaan ku guuleysan wax koob ah tan iyo 2008 oo ahaa League cup.
Tottenham ayaa qaabili doonta finalka League Cup-ka Manchester City iyagoo aan laheyn tababare, waxaa kale oo laga yaabaa laacibkooda ugu wanaagsan Harry Kane uusan ka qeyb gelin, waxaa la arkayay asaga oo dhutinaya ciyaartii ku dhamaatay 2-2 oo ay la ciyaareen Everton maalintii Jimcaha. Taasina waxay aheyd ciyaartii ugu dambeysay ee uu hogaamiyo Mourinho.